MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYGA EE LOO YAQAAN 'AMERICAN ESKIMO DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga ee loo yaqaan 'American Eskimo Dog'
Chloe oo reer Mareykan ah oo buuxa oo Eskimo ah
Liistada eeyaha Mareykanka ee loo yaqaan 'Eskimo Mix Mix'
Ey yar oo Eskimo ah
Heerka Eskimo Eyga
Toy Eskimo Ey
American Eskimo waa eey qurux badan, yar yar ama dhexdhexaad ah oo nooca Nordic-ka ah oo u eg Samoyed yar. Waxaa jira saddex nooc: toy, miniature iyo standard. Taasi waxay ka dhigan tahay inuu jiro Eskie dhammaan danaha iyo cabirka guryaha. American Eskimo wuxuu leeyahay madax qaab qaabeed leh oo xamuul ah iyo qalfoof dhererkiisu isku mid yahay. Waxay leedahay dhego kacsan, qaab saddex-geesood ah, iyo dabo aad u xoog badan oo gadaal u duuban. Qoortiisu si fiican ayaa loo qaadaa oo khadka sare ayaa fiican oo heer ah. Lugaha wanaagsan iyo cagaha ayaa u oggolaanaya Eskie inuu ku tunto ficil geesinimo leh, oo firfircoon. Koodh-qaadashada sare waa had iyo jeer caddaan, ama caddaan leh buskud ama calaamado kareem. Maqaarkiisu waa casaan ama cawl. Madow waa midabka la doorbido ee baalasha indhaha, ciridka, sanka iyo suufka. Koodhku waa culus yahay qoorta, abuurista ruff ama man, gaar ahaan ragga. Taranka ayaa waxyar ka dheer kan dheer. Koodhka American Eskimo waa inuusan duuduubin ama ruxruxin jaakadda hoose waa inay ahaataa mid qaro weyn oo dheeri ah leh jaakad ka sii daran oo ka soo baxda. Majiro midabbo aan ahayn kuwa kor lagu sharaxay. Indhuhu waa inaysan buluug noqon oo Eskie lama soo bandhigi karo haddii ay ka hooseyso 9 inji (23 cm) ama ka weyn tahay 19 inji (48 cm).
American Eskimo waa eey kalgacal leh, oo jecel. Hardy iyo ciyaar badan, waxay ku fiican yihiin carruurta. Soo jiidasho iyo feejignaan Sababtoo ah sirdoonka eeyga sare iyo rabitaankiisa inay ku farxaan, way fududahay in la tababaro oo inta badan waxay ka mid noqdaan kuwa ugu goolasha badan tijaabooyinka adeecida. American Eskimos waxay jecel yihiin inay shaqeeyaan. Waxay si dabiici ah uga digtoonaadaan shisheeyaha, laakiin markii la soo bandhigo waxay noqdaan saaxiibo deg deg ah. Eskimos waxay ubaahantahay inay kamid ahaato qoyska a hogaamiye xirmo adag, joogto ah, kalsooni leh . Haddii aad u ogolaato eeyga inuu aamino inuu isagu yahay taliyaha gurigaaga , darajooyin badan oo kala duwan arrimaha dhaqanka soo bixi doona, Oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, kala-go'id walaac , ciyey waswaas ah, dagaal gardarrada eeyga, badheedh iyo ilaalin . Iyadoo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed , waxay noqon karaan kuwo kacsanaan badan oo kacsan, wareega wareega. Eeyaha yaryar waxay leeyihiin u janjeeraan inay noqdaan hogaamiyaha xirmooyinka aadanaha, maxaa yeelay way yaryihiin wayna qurux badan yihiin, marar badana dadku waa iska indha tiraan wixii dhacay. Akhriso Cudurka Dog yar si aad wax badan uga ogaato.
Cunto: 9 - 12 inji (23 - 30 cm) 6 - 10 rodol (2.4 - 4.5 kg)
Ghadafi: in kabadan 12 (30 cm) ilaa 15 inji (38 cm) 10 - 20 rodol (4.5 - 9 kg)
Heerka: in kabadan 15 inji (38 cm) ilaa 19 inji (48 cm) 18 - 35 rodol (8kg - 16kg)
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia iyo atrophy retinal ee horumarka leh. Fiiro gaar ah u yeelo indhaha iyo marinnada jeexitaanka. Qaarkood waxay xasaasiyad ku leeyihiin boodada. Noocani wuxuu culeyskiisu si fudud ku kori karaa haddii uusan helin jimicsi ku filan iyo / ama aad loo kariyo.
American Eskimo wuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid aad u firfircoon gudaha iyo daarad yar ayaa ku filnaan doonta.
American Eskimo wuxuu u baahan yahay in lagu qaato a socod dheer maalin kasta . Waxay ku raaxeysan doontaa deyr amni leh oo ku lifaaqan halkaasoo ay ku socon karto bilaash, hase yeeshe weli waxay u baahan doontaa in dibadda loogu baxo si ay ugu lugeyso socod ay ku qanciso dareenkeeda tahriibka.
Celcelis ahaan 5 eeyo
Jaakad cufan oo baraf cad leh ayaa fududahay in la xafido. Ku caday burush adag oo adag isbuucii laba jeer. Waa in la cadayaa maalin kasta marka ay daadinayso. Noocani waa celcelis daadiya.
American Eskimo waa mid ka mid ah qoysaska Spitz ee reer Waqooyiga Yurub. Waxay xiriir dhow la leedahay caddaanka Jarmal Spitz . Spitzes-ka Jarmalka ayaa aakhirkii la keenay Ameerika, halkaasoo magaca loogu beddelay Eyga Mareykanka ee loo yaqaan 'Eskimo Dog' iyadoo ay ugu wacan tahay dareenka baahsan ee ka soo horjeedka Jarmalka intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka Maanta waxaa loo yaqaanaa inay yihiin nooc gaar ah, laakiin waxay xiriir dhow la leeyihiin Jarmalkii Spitz. The Samoyed , caddaanka Keeshond cad Pomeranian iyo Spitz-ka cad ee Talyaaniga ayaa sidoo kale la sheegay inay xiriir la leeyihiin Eyga Mareykanka ee loo yaqaan 'Eskimo Dog'. Cadeymaha ayaa soo jeedinaya in eeyaha 'White Spitz' ay markii ugu horeysay keeneen Mareykanka dad degen Jarmal ah in kastoo magacaas loo yaqaan, hadana wax shaqo ah kuma laha dhaqanka Eskimo. Magaca ayaa yimid sanadkii 1913 markii Mudane iyo Marwo F.M. Hall wuxuu markii ugu horreysay ka diiwaan galiyay UKC (United Kennel Club). Magacooda aqalku wuxuu ahaa 'American Eskimo,' kaas oo noqday magaca nooca. Sannadkii 1969-kii ayaa la aasaasay Ururka Eyga ee Qaranka Mareykanka ee loo yaqaan 'Eskimo Dog Association' waxaana la xiray buugaagta wax lagu barto. Naadiga Eyga ee loo yaqaan 'American Eskimo Dog Club of America' waxaa la sameeyay 1985 iyadoo ujeedadu tahay helitaanka aqoonsiga AKC. Xisbiga AKC wuxuu aqoonsaday Eyga loo yaqaan 'Eskimo Dog' ee Mareykan bishii Julaay 1, 1995. Ereyga Eskimo ee Mareykanka asal ahaan waxaa loo soo saaray inuu noqdo eey ujeedo badan leh oo ka shaqeeya beerta. Waa eey caqli badan oo dhaqaaqa, leh rabitaan xoog leh oo uu ku farxo, waa nooc feker ah oo leh dareen xoolaad aad u fiican. Qaar ka mid ah hibooyinka Mareykanka ee Eskimo waa xoolo raacid, ilaalin, ilaalin, ogaanshaha mukhaadaraadka, firfircoonida, u hoggaansanka tartanka iyo sameynta tabaha.
Waqooyiga, AKC-Ciyaaraha aan Ciyaaraha ahayn
NAPR = Diiwaangelinta Purebred ee Waqooyiga Ameerika, Inc.
Buddy Eyga reer Eskimo ee Mareykanka ee jira 5 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Ey American Eskimo ah
Sawirada Eyga Mareykanka ee Eskimo 1
Sawirada Eyga Mareykanka ee Eskimo 2
Sawirada Eyga Mareykanka ee Eskimo 3
Sawirada Eyga Mareykanka ee Eskimo 4
Sawirada Eyga Mareykanka ee Eskimo 5
Noocyada Jarmal ee Spitz
sidee ka badan ayuu falaa a whippet miisaantaan
madow iyo tan ingiriis ah oo yar yar oo ido ah oo iib ah
cocker spaniel shih tzu qas hypoallergenic
pitbull lagu qasay siberian husky